Fandotoana rano | Fiaretana haran-dranomasina
Ny kalitaon'ny rano manodidina ny tranom-borona dia zava-dehibe indrindra amin'ny fahasalaman'ny tontolo iainana sy ny fahombiazan'ny toeram-piompiana. Ho an'ireo karazan-kanina fahanana toy ny hazandrano, ny sakafom-be loatra dia mety hanjary azota sy fôpôly ary mety hiteraka fiantraikany amin'ny vondrom-piarahamonina bentik. Ny toeram-ponenana mampihetsi-po toy ny haran-dranomasina, ahidrano ary honko dia mety ho simban'ny otrikaina be loatra ao anaty rano, izay afaka mandrisika ny voninkazo ahidrano.
Ny isa / habetsaky ny tranom-borona azo tratrarina dia mety hiteraka fahasimban'ny rano. Raha faritra sasany dia mety afaka manohana tranokala kely kely kokoa tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny rano, ny fampitomboana ny isan'ny tranom-borona na ny fitahirizana trondro avo kokoa dia mety hamorona otrikaina be loatra izay tsy azon'ny tontolo iainana raisina maharitra. Rehefa mihoa-pampana, ireo otrikaina ireo dia mety hiteraka vokatra manimba, amin'ny endrika fitomboan'ny algala sy ny eutrofication, izay misy fiantraikany amin'ny ampahany betsaka amin'ny rano amoron-dranomasina manerantany. Amin'ny maha-fitsipika ankapobeny azy dia zava-dehibe ny famerana ny isan'ny tranom-borona amin'ny faritra kely izay mety hanimba ny tontolo iainana eo an-toerana ny azota sy ny phosoreo.
Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa afa-tsy amin'ny ohatra misy ao an-toerana, ny fiompiana anaty rano dia tsy loharanon'ny otrikaina lehibe na antony mahatonga ny fitrandrahana rano amin'ny renirano amoron-dranomasina. Ny fambolena sy ny fandroahana any amin'ny faritra be mponina no be mpandray anjara betsaka amin'ny sakafo ara-tsakafo. Na izany aza, amin'ny toe-javatra sasany, ny fiompiana anaty akondro dia nitana andraikitra lehibe ary naneho ny fandraisana anjarany hatramin'ny 10% amin'ny fatran'ny azota ary ny 26% ny famoahana fosfor amin'ny tranokala tsirairay. ref
Misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny rano avy amin'ny fiompiana hazandrano anaty zaridaina. Sary © Michael L. Webe, trano fanadiovana ny fiompiana ranomasina
Ny halalin'ny ranomasina
Ny halaliny eken'ny besinimaro ho an'ny tranom-borona an-dranomasina dia avo roa heny noho ny halalin'ny fanambanin'ny tranom-borona mba hisy fiantraikany kely indrindra amin'ny kalitaon'ny rano, ny tontolo iainana bentika ary ny toeram-ponenana saro-pady. Miankina amin'ny toeram-ponenana eo an-toerana sy ny anton-javatra hafa io halalin'ny soso-kevitra io. Miaraka amin'ny fikorianan'ny ankehitriny ambany kokoa, ny halalin'ny lalina kokoa dia ahafahan'ny effluent bebe kokoa hitaterana midina sy miparitaka any amin'ny tontolo iainana. Miankina amin'ny tontolon'ny benthic, mila tombanana ny rafitra fatorana samihafa mba ahafahana mametraka ny tranom-borona mety. ref Ny drafitra mety mandritra ny fisafidianana ny karazana tranokala sy ny tranom-borona dia ilaina amin'ny famaritana ireo faritra misy halalin'ny ranomasina.
Ny fambolena tranokala farafahakeliny indroa ny halalin'ny fanambanin'ny tranom-borona (20-60 m)
Toeram-pambolena sy fiompiana amin'ny faritra misy onja lehibe kokoa (.05 - .2 m / s) sy ny fivezivezena
Akaiky ny toeram-ponenana mora tohina
Ny halaviran'ny vatohara azo ekena amin'ny ankapobeny dia 200 metatra mba tsy hisy akony firy amin'ny kalitaon'ny rano, ny tontolo iainana benthic, ary ny toeram-ponenana mora tohina. Miankina amin'ny toeram-ponenana eo an-toerana sy ny anton-javatra hafa io halaviran-kevitra io ary raisina ho tombatombana mpandala ny nentin-drazana. Raha eo an-tampon'ny vatoharan-dranomasina na ahidrano ary any amin'ny faritra marivo ny tranom-borona, dia mety hanakana ny tara-masoandro hahatratra ny vatohara na ahidrano misy fiantraikany amin'ny fotosintesis ny cages. Na dia any ambanin'ny tranomaizina aza ny vatohara sy ny ahidrano, dia ilaina ny manombatombana ny hafainganan'ny onja mba hamaritana raha hahatratra ny effluent ary hisy fiantraikany ratsy amin'ireo tontolo iainana ireo. Toerana honenan'ireo biby haran-dranomasina koa ny honko satria manome toeram-pialofana sy zana-kazo. Tsy tokony apetraka amin'ny faritra honko ny cage satria mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny tontolo iainana ny fanangonana otrikaina. Toy izany koa, ny drafitra mavitrika sy ny fanaraha-maso tsy tapaka dia mila atao mba hanombanana raha misy ny fikorianan'ny tranomaizina mankamin'ny ala honko ankehitriny, ary raha izany dia afaka mifoka ireo otrikaina fanampiny ireo honko. ref
Fambolena tranokala farafaharatsiny 200 metatra miala amin'ny haran-dranomasina, honko, ary toeram-ponenana mora tohina. Zahao ary araho ny fitsipika eo an-toerana fa miaro kokoa izy ireo.
Midira amin'ny fanodinana trondro ivelan'ny toerana an-dranomasina mba hisorohana ny fako trondro tafalatsaka anaty rano
Diniho ny fampiasana ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaofiompiana trondro trofika maro, toy ny kolontsaina miaraka amin'ny fiompiana ahidrano ahitra mba hampihenana ny otrikaina be loatra ao anaty rano manodidina
Ny fiheverana fa ny tontolo iainana anaty rano isan-karazany dia afaka manohana maharitra ny tokonam-bidin'ny lanjan'ny trondro dia fantatra amin'ny hoe fahaiza-mitondra. Raha lany io fatran'ny fahaiza-mitondra io dia mety hisy ny voka-dratsy mety hanimba ny kalitaon'ny rano sy ny toeram-ponenany akaiky. Betsaka ny fomba sy modely saro-takarina izay afaka manazava sy maminavina ny fahaizan'ny tontolo iainana ary toy izany koa ny tranom-borona sy trondro azon'ny tontolo iainana tohanana. Zava-dehibe ny mahatakatra fa ny fahaiza-mitondra dia samy hafa amin'ny toerana misy azy, miankina amin'ny anton-javatra maro, toy ny onja, ny famaohana voajanahary, ny halaliny, sns.
Na dia iray amin'ireo fomba marina indrindra hanombanana ny fahaiza-mitondra entana aza ny fandalinana ny fahaiza-mitondra/famoronana modely voafaritra tsara amin'ny toerana, dia lafo matetika ireo modely ireo ary mitaky angon-drakitra sarotra izay mety tsy ho azo. Noho izany, misy firenena sasany mampiasa fomba hafa amin'ny fametrahana fetra amin'ny habetsahan'ny fiompiana trondro mety hitranga ao anaty rano, toy ny fametrahana ny isan-jaton'ny rano azo ampiasaina amin'ny fambolena fiompiana sakafo na ny fametrahana fepetra amin'ny elanelana kely indrindra eo amin'ny toeram-piompiana. Ny halaliny, ny onjan-drano, ny onjan-drano, ny karazana fahana, ny habetsahan'ny sakafo ary ny karazana voafantina dia misy fiantraikany amin'ny fahafahan'ny faritra iray mitondra. ref
Raha azo atao dia mitondrà fandalinana fahaizam-bidy na maodely hanampy amin'ny famaritana ny fiatraikany amin'ny kalitaon'ny rano sy ny fetrany ambony amin'ny isan'ny cage / trondro ao amin'ny faritra an-dranomasina
Raha tsy azo atao ny mianatra na maodely mitondra, alao ny mametraka toe-javatra hafa (ohatra, ny elanelana kely indrindra eo amin'ny toeram-piompiana) hahazoana antoka fa tsy mihoatra ny fetra voajanaharin'ny vatan'ny rano ny isan'ny tranom-borona.
Araho maso ny otrikaina, ny kalitaon'ny rano ary ny voninkazo ahidrano
Ny fantson-drano sy ny fivezivezena
Ny tondra-drano sy ny onja ankehitriny dia lafiny iray lehibe amin'ny fipetrahana takelaka atolotra. Ny onja anaty dia afaka mitondra otrikaina tranom-borona manakaiky ny morontsiraka sy mankamin'ny honko, estuaries, ary faritra misy mponina betsaka kokoa, raha ny onja misamboaravoara kosa dia afaka mitarika rano mivoaka mankany amin'ny ranomasina malalaka. Manala ireo otrikaina avy ao amin'ny faritra tranom-borona ireo onjam-bola ary mamela ny ranomasina manankarena oksizenina mandalo ao anaty tranom-borona ary manome ny oxygen ilaina amin'ny trondro maniry. Raha tsy izany, ny faritra fihinanan'ny hazandrano tsy misy onja na onja ampy dia hijanona ary tsy hanome flushing mety. Zava-dehibe ny fandinihana ny onja sy ny tantara ankehitriny mba hahafahana maminavina hoe hatraiza ny faritra aroso tsara haharitra ny famokarana fiompiana fiompiana trondro. ref
Toeram-pambolena sy fiompiana amin'ny faritra misy onja misimisy kokoa (.05 - .2m / s) sy ny fivezivezena
Sorohy ny fampiasana simika sy antibiotika, raha azo atao
Mampiasà fomba fanadiovana tsy simika hanadio sy hitazomana tranom-borona
Raha mampiasa simika dia manaova drafitra asa hamaliana ny fiparitahan'ny simika, ao anatin'izany ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta tokony hampandrenesina
Tokony hisy ny fanaraha-maso ny tontolo iainana hamaritana raha misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny rano ny fambolena. Ity fanaraha-maso ity dia tokony hampidirina ao anaty fotony tsara ny tototra mihantona, ny mari-pana amin'ny rano, ny oksizena voafafy, ny masira, ny azota (amoniaka, ny nitrate, ny nitrite), ny phosforus, ny silicates, ny klôlôphil ary ny PH. Farafaharatsiny farafahakeliny, ny fanaraha-maso dia tokony ahitana ny fandrefesana ny oxygen sy ny amoniaka efa levona. ref Zava-dehibe ny fanaraha-maso ireo masontsivana momba ny kalitaon'ny rano amin'ny toerana maro manodidina ny tranom-borona mba hamaritana hoe hatraiza ny fiatraikany amin'ny rano eo an-toerana.
Mametraha fandinihana ifotony sy mametraka fetran'ny otrikaina sy kalitaon'ny rano. Na dia tokony hasiana tombana tsara aza ny anton-javatra iray, ny fametrahana fari-pitsipika sy famerana fetra ho an'ny oksizena sy amoniaka levona dia tena ilaina amin'ny fiompiana trondro an-dranomasina
Manorata ary araho ny drafitra fanaraha-maso hiarovana ny toeram-ponenana an-dranomasina mora tohina toy ny haran-dranomasina, ahidrano ary honko
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFomba sy fanao amin'ny fiompiana anaty rano: famerenana voafantina
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFambolena voajanahary eran-tany: ny fiantraikan'ny tontolo iainana sy ny fanoloana vahaolana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFisafidianana toerana ho an'ny fiompiana anaty rano: toetra ara-batana amin'ny rano
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTorolàlana momba ny fanaraha-maso ny tontolo iainana ho an'ny fiompiana akondro ao amin'ny fanjakan'i Saudi Arabiamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy fiantraikan'ny fiompiana amin'ny fambolena sy fiompiana ao amin'ny Reservoir Changshou